Maxay tahay sifooyinka cusub ee vSphere 6.5: vCenter Server
Maxaa Cusub ee cusub ee vSphere 6.5 Features: vCenter Server
VMware waxay ku dhawaaqday qaabka ugu dambeeya ee vSphere 6.5 waxayna u damaanad qaadeysaa in ay ku xirto hannaan cusub oo cusub, taas oo ka dhigeysa mid aad u qurux badan oo ka duwan kii hore. Bixinta waxaa kormeeray qalabka "vCenter Server Appliance" iyo waxaa jiray wadarta guud ee qalabka rakiban, oo leh dareemo casri ah oo casri ah. Waxaa loo isticmaali karaa Linux iyo Mac labadaba, oo ay weheliso dookha sare ee hore, Microsoft Windows. Waxaa sidoo kale jira baaxadda qaybaha cusub ee VCenter Server Appliance kaas oo ku daraya wax kasta oo ka mid ah:
Noocyada vSphere 6.5
Helitaanka Hoose ee Degaanka: Qalabka VCenter Server wuxuu leeyahay Habboonaanta Habboon ee Habboon oo keliya oo ah qaabkan. Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan qorshahan Hawlgalkan, Dhalasho iyo Marqaatiyadu waa kuwa ugu badan oo ay si toos ah ugu qoondeeyaan Server VCenter Server. Qaabka ayaa laga yaabaa inuu soo gaabiyo haddii hubka oo dhan laga lumo, laakiin fursada ma'aha mid aan ku haboonayn noocaas.
Socdaalka: Waxay ahayd mid aan sugneyn in la galo VCenter Server Appliance ka hor, hase yeeshee marka la soo bandhigo qalabka Socdaalku, kani waa dhammaan xisaabtahooga fudud oo si aad ah waxtar u leh marka loo eego vSphere 6.0 Cusbooneysiinta 2m. Hadda waxay hoosta ku hayaan Windows vCenter Server 5.5 iyo 6.0, qofkasta oo hadda socda ee ugu dambeeya wuxuu heli karaa qalabka adeegsiga vCenter Server isagoo isticmaalaya qalabkan.
Ka shaqeeyey Backup ama Restore: Qeybta hoosta ayaa si buuxda u cusub oo u ogolaaneysa macaamiisha in ay hoos u dhigaan dhammaan vCenter Server iyo Platform-ka maamulka mishiinada mishiinka, oo si toos ah ula xiriirta VAMI ama API, oo ay weheliso VUM iyo wax kasta oo Gawaarida si toos ah ugu dhex soconaya qalabka. Waxay ka kooban tahay nidaam guud oo ah diiwaanada la dhejin karo qalabka waxqabadka leh ee macmiilku u baahan yahay isticmaalka SCP, HTTP (s), ama FTP (s).
Maamulaha Cusub ee VMware: Qalabka VCenter Server hadda wuxuu ku darsaday VUM iyo kuwa xooggan oo hagaagsan si ay u dhaqaaqaan iyada oo aan lahayn server Windows ee VUM soo dhaweynayo. Shakhsiyaadka horay u soo guuray nidaamka dib u habeynta 6.0 hadda waxay u guuri doonaan xuduudaha VUM iyo hagaajinta 6.5, iyada oo ay ku jiraan qalabka vCenter, stock, iyo wargelinta digniinta oo sidoo kale la mid noqon lahaa.
Hagaajinta Maaraynta Qalabka: Awooddani waxay si joogta ah u oggolaataa qaab-dhismeedka horumarkeeda iyadoo ay ka muuqatay wax kasta oo dheeraad ah sida codsiyada guud. Interface waa mid toos ah oo fudud oo la isticmaalo oo muujinaya Tirakoobyada Shabakada iyo Database, oo ay weheliyaan meel lagu nasto iyo saxanka. Mid ka mid ah ayaa sidoo kale ka fekeraya cabbiraadda CPU iyo xasuusta taas oo intaa sii yaraysa isku xirka xariiqda khadka taleefanka si loo yareeyo khaladaadka hawlgalka iyo kormeerka.
Waxyaabo kale oo dheeraad ah waa vSphere Web Client, oo ay weheliso dhamaystiran oo ku salaysan HTML5-ku salaysan vSphere Client kaas oo markaa siinaya aasaas adag oo karti leh ganacsi oo qiimeeya isbeddelka isbeddelka ah ee xisaabinta loo qaybiyo, horumarinta dhaqaalaha kombiyuutarka. VMware vSphere 6.5 wuxuu si toos ah u keeni doonaa tayada cusub iyo kicinta waxqabadka si loo helo wax soosaarka ganacsi oo caan ah.
7 Tababaro cajiib leh oo ku saabsan Shahaadada VMware